Calling for Admission to Master Program for YAU – Yezin Agricultural University
Select PageHomeAbout YAU Vision and Mission Introduction Historical Background Administrative Organization YAU MailAdmissionDepartments Administration  JICA Japan  Department of Admin  Department of Academic  Department of International Relation Agricultural Production  Department of Agronomy  Department of Plant Breeding, Physiology and Ecology  Department of Horticulture  Department of Animal Science  Department of Agricultural Engineering  Department of Food Science  Department of Agricultural Biotechnology Agricultural Environment  Department of Soil and Water Science  Department of Plant Pathology  Department of Entomology  Department of Agricultural Microbiology Social Science and Economics  Department of Agricultural Economics  Department of Agricultural Extension General Education  Department of English  Department of Myanmar  Department of Mathematics  Department of Physics  Department of Chemistry  Department of Botany  Department of Zoology Supporting  Department of Information and Technology  Department of YAU Farm  University Library  Department of SportAcademics ACARE Postgraduate Program Undergraduate Program Special Lectures and Monday SeminarsYAU Campuses Hlegu Campus Mawlamyine Campus Hmawbi CampusNewsContact Us
Calling for Admission to Master Program for YAU
စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံ (M.Agr.Sc.) သင်တန်းဝင်ခွင့်ကြေညာချက်
၁။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက်တွင် ​ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချမည့် စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံ (M.Agr.Sc.) သင်တန်းသို့ လုပ်ငန်း/ဌာန အသီးသီးမှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Agr.Sc.)နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (PostgradDipAgSc) ရရှိပြီးသည့် ဝန်ထမ်းများသည် ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဝက်၌ စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံသင်တန်းကို အောက်ပါ အထူးပြု ဘာသာရပ်များကို လက်ခံသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ Plant Breeding, Physiology& Ecology
၃။ Soil & Water Science
၄။ Plant Pathology
၆။ Horticulture & Agricultural Biotechnology
၇။ Agricultural Economics
၃။ စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံသင်တန်းအတွက် အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
(က) လျှောက်ထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
(ခ) စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Agr.Sc.)နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (PostgradDipAgSc)ကို လုပ်ငန်း/ဌာနများမှ တက်ရောက် အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဘွဲ့ ရရှိပြီးနောက် ဌာနတာဝန်ကို အနည်းဆုံး(၁)နှစ် ပြန်လည်ဝင်ရောက် ထမ်းဆောင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) (၂၅-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် အစိုးရဌာနများတွင် လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၂)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်(၄၅)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။ (ချွင်းချက်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ပထမဘွဲ့ကို (Top 10%)အတွင်း ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ရရှိခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အနည်းဆုံး လုပ်သက်(၁)နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။)
(ဃ) သင်တန်းကာလမှာ (၂)နှစ်မှ (၃)နှစ်ဖြစ်၍ အချိန်ပြည့် တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(င) စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Agr.Sc.) နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲ၌ မဟာသိပ္ပံသင်တန်း တက်ရောက်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီ (Qualified)ဖြစ်ရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (PostgradDipAgSc) ရရှိပြီးသူများသည် (Grad Point Average 4.5 နှင့်အထက်) ရရှိရမည်။
(စ) စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံဝင်ခွင့်အတွက် တက်ရောက်လိုသည့်ဘာသာရပ်ကို ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆို ရမည်ဖြစ်ပြီး ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်မှသာ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
၄။ လျှောက်ထားလိုသူ ဝန်ထမ်းများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ နောက်ဆုံးနှစ်အောင်မြင်ကြောင်း ထောက်ခံစာ(BC)မိတ္တူနှင့် အမှတ်စာရင်း(MC) မိတ္တူများ ပူးတွဲလျက် မိမိတို့ လုပ်ငန်းဌာန၊ ရုံးချုပ်မှတစ်ဆင့် စီမံကိန်းဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။
၅။ စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ စိစစ်ပြီး သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် လျှောက်လွှာများကို စုစည်း၍ (၂၅-၉-၂၀၁၇)နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သို့ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများသည် စာမေးပွဲကြေး (၁၀၀ဝိ/-) (ကျပ်တစ်ထောင်တိတိ)ကို ( ၉-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၁၀-၁၀-၂၀၁၇)အထိ ဤတက္ကသိုလ် ငွေကိုင်ဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
၇။ ရေးဖြေ၊ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲကို အောက်ပါအတိုင်းဖြေဆိုရမည်။
(က) ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက် ။ ။ ၁၂-၁၀-၂၀၁၇ (ကြာသပတေးနေ့)
ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်(အင်္ဂလိပ်စာ) ။ ။ ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ (သောကြာနေ့)
(ခ) ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်အချိန် ။ ။ နံနက်(၉:၀၀-၁၂:၀၀) နာရီ
(ဂ) နှုတ်မေးစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက် ။ ။ ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ (အင်္ဂါနေ့)
နှုတ်မေးစာမေးပွဲကျင်းပမည့်အချိန် ။ ။ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ
၈။ စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်သူများသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ပထမစာသင်နှစ်ဝက် (First Semester)မှစ၍ စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံသင်တန်း (M.Agr.Sc.) သို့ တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်သည်။
၁။ အမည် ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
၂။ အဘအမည် ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
၃။ မွေးသက္ကရာဇ် ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အမှတ် ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
၅။ ဘွဲ့ရသည့်ခုနှစ်/ခုံအမှတ် ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
၆။ အောင်မြင်ခဲ့သည့်အထူးပြုဘာသာ ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
၇။ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းစတင်ဖြစ်သည့်နေ့နှင့်လုပ်သက် ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(Duty Report စတင်ပေးသောနေ့ကိုဆိုလိုသည်) ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
၈။ အလုပ်အကိုင် ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
၉။ တက်ရောက်မည့်သင်တန်း ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
၁၀။ အဓိကသင်ကြားလိုသည့်ဘာသာရပ် ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
၁၁။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ် ၊−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
28th Convocation Announcement
First Year Candidate Lists
First Year Entrance Announcement